काठमाडौं–रक्सौल रेल ल्याउने सहमति, कहिले आइपुग्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं–रक्सौल रेल ल्याउने सहमति, कहिले आइपुग्छ ?
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंलाई भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रसँग रेलमार्गले बनाउन नेपाल र भारतले सहमति जनाएका छन्।
तीन दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा शनिवार औपचारिक भेटवार्ता भएपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उक्त सहमतिबारे विस्तृत खुलाइएको छ।
सहमति अनुसार भारतीय पक्षले एक वर्षभित्र उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा गर्नेछ।
याे पनि पढ्नुस यस्ताे छ प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमणमा जारी १२ बुँदे स‌युक्त बक्तव्य
कार्यान्वयन तथा लगानीको प्रारुपबारे चाहिँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार पछि गरिने बताइएको छ।
तर भारतीय पक्षको आर्थिक सहयोगमा त्यो निर्माण हुने भने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। रेलमार्गको निर्माणलाई कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्नेबारे खुलाएका छैनन्।
नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग सञ्चालनमा भएपनि राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
अर्को छिमेकी चीनको सीमावर्ती क्षेत्रलाई पनि काठमाडौंसँग रेलमार्गले जोड्ने तयारी अघि बढिरहँदा दक्षिणी छिमेकी भारतको पछिल्लो सहयोग प्रस्ताव आएको छ।
कतिपयले पछिल्लो भारतीय सहयोगलाई चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिने कदमका रुपमा अर्थ्याएका छन्।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पाँचवटा स्थानमा सीमावर्ती क्षेत्रलाई रेलबाट जोड्ने योजनालाई पनि तीव्रता दिने सहमति जनाएको बताइएको छ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
न्यू जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा, नौतन्वा–भैरहवा, नेपालगञ्ज रोड–नेपालगञ्ज, जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिवास र जोगवनी–विराटनगर रेल मार्गमा काम भइरहेको छ।
यस्तै जयनगरबाट जनकपुर तथा कुर्था र जोगवनीबाट विराटनगर जोड्ने काम सन् २०१८ भित्रै सकिने वक्तव्यमा जनाइएको छ।
ट्याग्स: pm india visit